“Waan Ka Xumahay In Ciyaartoyga Barcelona Ka Maqnaadaan Xafladda, Waanse Dareemi Karaa” – Ronaldo Oo Ka Xumaaday In Messi Ka Maqnaado Xafladdii Lagu Caleemo Saaray
HomeWararka Maanta“Waan Ka Xumahay In Ciyaartoyga Barcelona Ka Maqnaadaan Xafladda, Waanse Dareemi Karaa” – Ronaldo Oo Ka Xumaaday In Messi Ka Maqnaado Xafladdii Lagu Caleemo Saaray
Cristiano Ronaldo ayaa is dhaafin kari waayay, isla markaana khudbadiisii masraxa ahayd markii la gudoonsiiyey abaal marinta xiddiga aduunka, martida hortooda kaga hadlay, siduu uga xun yahay in Lionel Messi iyo xulafadiisii Barcelona ay ka maqan yihiin oo ka baaqdeen madasha lagu caleemo saarayay isaga Isniintii.
Messi — oo uga baaqday ka soo qayb galka, xafladdii Xidignimada aduunka ee Zurich, wadanka Switzerland, ka dhacday, kooxdiisa Barcelona oo hawl lahayd darteed, iyo laacibka naadiga Atletico Madrid, Antoine Griezmann ayaa ahaa labada shaqsi ee uu xiddiga reer Portugal kaga guuleystay abaal marinta.
Kadib markii farta laga saaray, biladdii xidignimo, Ronaldo, wuxuu go’aan ku gaadhay inaanu makarafoonka ka deggin isagoo aan soo hadal qaadin ciyaaryahanada Barcelona, kuwaas oo inay ka baaqdeen xafladda soo sheegay 48 saacadood uun ka hor markii ay dhici lahayd, ciyaar adag oo ay wareega 16 dhamaadka Copa del Rey la leeyihiin Athletico Madrid awgeed.
Ronaldo markii uu qabsaday cod baahiyaha, wuxuu hadalkiisa ku bilaabay: ‘Guushani waa mid cajiib ah shaqsiyan. Aan la rumaysan karin, waligay sanadkan ilaabi maayo. Aad baan u faraxsanahay. Qof kasta ayaan u mahad celinayaa, wax kale oo aan odhanayaa ma jiraan. Abaal marinadu iyaga ayaa iskood isu fasiraya.
‘Anigu kaliya waan faraxsanahay. Aad waxaan uga xumahay inaan dad Barcelona ka socdaa goobta inala joogin, laakiin taasi waa wax la fahmi karo.’
Wuxuu intaas raaciyey isagoo hadalka sii wata: ‘Waa cajiiib. maaha markii koobaad, laakiin tani waa tii u horeysay, uguna muhiimsanayd, ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa ciyaaryahanada aanu isku kooxda nahay , Real Madrid iyo tabobaraha. Waad ku mahadsan tihiin wax kasta oo aad i tarteen. Waxaan sidoo kale mahad u celinayaa qoyskayga, Walaaladay, Hooyaday, guud ahaan shaqaalahayga, 100 kiiba boqol, gacan qabashadoodii.
‘2016 wuxuu ahaa sanadkii ugu fiicnaa intii aan ciyaaraha ku soo dhex jiray. Shaki badan ayaan markii hore qabay, laakiin koobabka aan qaaday ayaa odhaah kuugu filan. Waxaan ku guuleystay wixii ugu fiicnaa tartamada, kadibna waxaan hantiyey wixii aan qabtay.’
Ronaldo, Messi, Robben – Yaa ku guulaysan Doona Abaalmarinta 2013-14 Goal 50?
Pique Sidee Uga Dareen Celiyey Goolkii Aan Saxda Ahayn Ee Cristiano